Nsuku zonke ubudlelwane kwezepolitiki futhi izinqubo uthola unamandla amakhulu. Kunzima ukusho ukuthi yini kwamakhosi namuhla, yiziphi izinhlobo manje futhi, okubaluleke kakhulu, ingabe okuhle noma okubi ngokuba nabantu bakuleli zwe kanye nomphakathi wonkana. Naphezu kwalokhu, ngakho ngokomlando, ukuthi kunezinhlobo ezimbili eziyisisekelo uhulumeni, kokuba njengoba division layo langaphakathi. Futhi bakwazi ukukhuluma mayelana yinkimbinkimbi kokuphila zezombusazwe yesimanje, kubalulekile ukuba siqonde umbono kokuqala. Ngakho, iningi lezazi umbuzo "Kuyini amakhosi ohlanga" uzokuphendula kanje: kuba uwuhlobo oluthile lukahulumeni esimweni, okuyinto libhekene igunya impilo yonke yedwa (oyedwa), ngokuvamile ngofuzo. Omunye kushiwo kufanele ukuthi kwamane kwazenzakalela, aphume ndawo, yena akakwazi ukuthatha. nkosi Okokuqala wathatha izintambo ngezindlela ezimbili eziyinhloko: by ukhetho noma ukunqoba umqhele enobudlova.
Kukhona izinhlobonhlobo emibili eyinhloko autocracy - akanamkhawulo (noma eliphelele) kanye lapho sebebuswa inkosi elinganiselwe (bheka futhi ihlukaniswe yaba Amalungu, zomthethosisekelo kanye esikabili).
Kokuqala kubhekwe uwuhlobo oluthile lukahulumeni libhekene yokuthi uhulumeni inviolable, it is ngokungenamibandela ngofuzo (ikakhulukazi ngaphakathi uhlobo lwe efanayo) kanye kungokwalabo umnikazi ukuphila. Ngaphezu kwalokho, umbusi yenze isenzo izinyathelo ngokuphelele esekelwe umbono wakhe siqu futhi engatheli yimuphi umthwalo izenzo zabo. Kuyini lapho sebebuswa inkosi lapho inkosi (noma Sheikh) ncisheka kanjalo ekuphishekeleni ngenhloso yokwenza kuphela?
Kulokhu kuyisiko ukukhuluma dlova noma despotism esimweni.
Ngaleso sikhathi samanje, cishe, akukho ohlanga ngokuphelele injalo elicwengekileyo. I esiseduzane kuzoba uwuhlobo oluthile lukahulumeni e Oman futhi Saudi Arabia.
Uyini ohlanga esikabili uhlobo? Lo mqondo samuva nje, nakuba amasampula engokomfanekiso alikho namuhla emhlabeni. ohlanga Dual yayinezinto eziningi emazweni amaningi esikhathini esidlule - Italy, Prussia nabanye. Isici yalesi zohulumeni kwakuwukuba khona kwezithunywa umzimba zomthetho ngaphandle ikhanda. Wayelethwa ogunyazwe ukukhipha iziqondiso, okuyinto Nokho, uma le nkosi ayikwazanga "ukwenqaba" noma ngokungenamibandela ukubenza izinguquko zabo, futhi ngezinye izikhathi ngisho ukuncibilikisa ephalamende.
Okwamanje aziwa kakhulu yathola amandla nemikhawulo. ohlanga yanamuhla ezivame kakhulu kuleli fomu yomthethosisekelo noma ePhalamende. Endabeni wangaphambili amandla umbusi wanciphisa setha kwamalungelo akhe nezimiselo zakhe (njengoba e Luxembourg, Netherlands, Qatar et al.). Esikhathini yesibili it is ayisa kwenkululeko ePhalamende, amandla elikhulu, elingase ezimweni eziningi ebanzi kuka kwenkosi esihlalweni sobukhosi. Amazwe elinefomu ezinjalo uhulumeni - Canada, Thailand, Nepal, Australia kanye nabanye.
ososayensi Political sikude futhi ezinye izinhlobo kwamakhosi okwamanje. Lezi ezintsha zibangela ushintsho esimweni idivayisi wamanje emazweni amaningi. Ngokwesibonelo, e-United Arab Emirates usebenza ohlanga republic lapho umholi olulodwa ngezikhathi aqoke inhloko yawo lo mfelandawonye.
Ngeshwa, namuhla akunakwenzeka ngokuqiniseka lokho zohulumeni kungcono. Ngisho e-republic yeningi kakhulu, okuyinto ngokusemthethweni ezweni angasebenza uhulumeni ehlanganisa abantu cishe kobushiqela ngokwesaba. Ngamanye amazwi, konke, owaziwa umkhuba, ngisho noma sifundwa kuwo theory.
Izindlela ukukhuthazwa kanye iwebhusayithi ukukhuthazwa
Igama Isi-Chuvash - lisuselwa inkolo yobuKristu futhi ithonya Islam